Takelaka fanatanjahan-tena labyrint - labyrint ho an'ny ankizy - pejy fandokoana maimaim-poana
Takelaka fanatanjahan-tena labyrint - labyrint ho an'ny ankizy
Inona no lalana mankany amin'ny tanjona? Tadiavo amin'ny alàlan'ny rantsantanana na penina ny dianao. Tandremo anefa fa ny lalana dia mety hitarika any amin'ny làlan-kizorana haingana.
Amin'ireto maze ireto ho an'ny ankizy, ny tanjona dia ny mitady ny làlana marina mankany afovoan'ny maze. Ataovy pirinty ny modely ary manomboha. Mety ho an'ny fanazaran-tena amin'ny fampianarana any an-tokantrano. Amin'ny fipihana ny sary dia misokatra amin'ny endrika PDF ny labyrint:
Rano fanatanjahan-tena | Sekoly fanabeazana fototra any an-tokatrano
Maze / maze toradroa ho an'ny ankizy
Maze / maze ho an'ny triangles ho an'ny ankizy
Maze ho an'ny olon-dehibe